Daryeelka maqaarka ilmaha yar iyo dhalinta - Daryeel Magazine
Maxaa gaar ku ah maqaarka ilmaha yar oo dhashay?
Sidee loo dhaqi karaa maqaarka ilmaha dhashay?
Waa muhiim in ilmaha maqaarkiisa lagu mayro biyo diirran oo keliya. Waxaa dhici karta in saabuuntu ay qallajiso maqaarka ilmaha.
Biyaha qubayska oo loogu daro in yar oo saliid aan la carfin ah waxay caawin kartaa in maqaarku ahaado mid jilicsan oo aan jajabin.
Ka dheeroow xumbad qubayska sababtoo waxay qaadi kartaa saliida dabiiciga ee maqaarka, sdoo kale waa in laga dheeraadaa saabuunta la carfiyay iyo weliba dawooyinka bakteeriyada lagula dagaallamo madaama ilmaha ay ku keeni karaan cuncun. Waa in si deggan oo tartiib ah loo qallajiyo goobaha jirka uu ka laablaabmo sida kilkilaha dhagaha gadaashooda iyo surka qubayska kadib. Haddii maqaarku badanaa yahay mid qalalan wuxuu u baahan karaa kareemka jirka qooya dhowr jeer maalintii gaar ahaan qubayska ka dib.
Qoynta maqaarka ilmaha
In yar oo kareemka jirka qooya ah oo tayo leh sida sorbolene, aqueous cream ama paraffin ayaa la adeegsan si loogu nadiifiyo goobaha naabiga sidoo kale kiriimyadaan waxaa loo isticmaali karaa jir qooyayaal ahaan qubayska kadib. Hadii maqaarka cunugaaggu uu yahay mid qalalan waa muhiim inaad ka fogaato isticmaalka saabuunta isla markaana aad si joogto ah u mariso kareemyada maqaarka qooya.
Maqaarka ilmaha iyo kulaylka kala duwan
Maqaarku wuxuu caawiyaa kontaroollaa kulaylka jirka. Ilmaha aadka u yaryar, kontaroolida kulaylka iyo qabowga aadka u badan waa uu ku adag yahay. Hawada diiran, nalka, dhar ilmaha ka waaweyn oo cudbi ah ama cudbi/synthetic isku jira ayaa ugu fiican.
Hawada qabow: cudbi iyo synthetic isku jira dharka ah ayaa la isticmaali karaa. Dharka ka samaysan dhogorta oo cudbiga lagu dulsameeyey wax shida ah ma leh.
Bartu badanaa kama muuqato marka ilmuhu dhasho. Waxaa siyaadaa midabka ay sameeyaan unugyadu “melanocytes”, Waxayna ku dhacdaa carruurta markay yar yihiin ayna u furan yihiin qoraxda siyaadada ah khaasatan meelaha ay ka midka yihiin camanka, gacmaha gadaashooda.
Baraha waxaa lagaga hortegi karaa qoraxda oo si fiican la isaga difaaco. Marku qoraxdu diiran tahay, dhar khafiifa, koofiyado, haraynta baraamka ilmaha lagu qaado (prams) iyo meel hara marka banaanka la joogo ayaa ah waxa ugu fiican oo looga hortegi karo Ilayska qoraxda “UV”.
Daryeelka agagaarka naabiga
Si joogto ah u beddel naabiga
Isticmaal naabi ay tayadiisu sarreyso
Biyo kulul ayaa lagu dhaqi kara meelaha naabiga
Kareemka Aqueous ama sorbolene ayaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo agagaaraha naabiga.
Daryeelka timaha iyo ciddiyaha
Carruurta aadka u yaryar badankood, timuhu uma baahna shaambo. Haddii la doonayo in shaambo la isticmaalo, shaambada awoodeedu yar tahay ayaa ugu fiican, waana inaad sida iyo inta ugu yar isticmaashaa.
Cidiyaha ilmaha dhashay badanaa waa jilicsan yihiin waxaana laga yaabaa in aanay u baahan in laga jaro bilaha ugu horreeya.
Cuntooyin Ay Tahay Inay Ka Fogaato Hooyada Ilmaha Naaska Nuujisa Korniinka Dabiiciga Ee Ilmaha, Miisaanka Ugu Haboon Iyo Nafaqayntiisa Caalamadaha Soo Bixidda Ilkaha Caruurta Iyo Daryeelka Ay U Baahan Yihiin Waxyeelada Ay Daawooyinku Ku Keenaan Hooyada Uurka Leh Iyo Ilmaha Ay Sido